Gebze Seyahat Kartları Ofisi Yeni Yerine Taşınıyor | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[09 / 11 / 2019] 19.362.135 ခရီးသည်များသည်အောက်တိုဘာလတွင်လေဆိပ်များ၌အမှုဆောင်ကြသည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[09 / 11 / 2019] EGO အထွေထွေမန်နေဂျာAlkaşသည် Psycho-Technical Center သို့သွားရောက်လည်ပတ်သည်	06 တူရကီ
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliGebze ခရီးသွားကဒ်များရုံးသည် New Place သို့ပြောင်းသည်
15 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှနိုင်ငံသားများအား ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အတိုင်းအတာကိုဆက်လက်ထားရှိသည်။ ဤအခြေအနေတွင် Gebze Travel ကဒ်ပြားရုံးကို Gebze Town Square ရှိ၎င်း၏နေရာအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။
Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်က Kent Card ၏တောင်းဆိုမှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်လျင်မြန်စွာရှာဖွေရန် ရည်ရွယ်၍ ခရိုင်များတွင် Bul Travel Card Office ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ Kart ခရီးသွားကဒ်ရုံးအဆောက်အအုံသည်ကူရူလန်ကိုနိုင်ငံသားများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် Gebze ဒေသရှိ Kart ခရီးသွားကဒ်ပြားရုံးကို Gebze Town ရင်ပြင်ရှိ Cabin အဆောက်အ ဦး သို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။
လက်ရှိတွင် Gebze Osman Hamdi Bey ယဉ်ကျေးမှုစင်တာသည် Gebze ခရီးသွားကဒ်များရုံးတွင်လည်ပတ်နေသော Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာ Gebze ဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အအုံတွင်တည်ရှိပြီး Gebze ရှိလူ ဦး ရေသိပ်သည်းဆများပြားလာခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပိုမိုကြီးမားသောအဆောက်အ ဦး တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်လာသည်။ တိုးပွားလာနေသောလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် Gebze Travel ကဒ်ပြားရုံးကို Gebze Town ရင်ပြင်ရှိ Metro Promotion Office (Cabin) သို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။
ရုံးကိုအောက်တိုဘာ 25 တွင်စတင်လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ခရီးသွားကဒ်ရုံးသည်လျှော့စျေးနှင့်အခမဲ့ခရီးသွားကဒ်များနှင့်ဗီဇာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးမည့်ရုံးသည် Darica၊ Cayirova၊
အားလုံးတူရကီကျော်တစ်ကဒ်နှင့်အတူ "အမျိုးသားအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကတ်များ" ရောက်ရှိဖို့မည်! 14 / 03 / 2012 Ulaştırma Bakanlığı, ülke genelinde tren, gemi, otobüs, metro ve hafif raylı sistemlerde geçerli olacak “ulusal toplu taşıma kartları” için kolları sıvadı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, toplu taşımada ses getirecek…
IETT တက္ကသိုလ်မှမှတ်ပုံတင်စဉ်အတွင်းİmdirimlခရီးသွားကတ်များအားငါပေးမည် 07 / 09 / 2012 ကျောင်းအပ်လျှောက်လွှာလျှောက်ထားစဉ်ကာလအတွင်းလျှော့ချခရီးသွားကဒ်ပြားများရရှိရန် Istanbul Electric Tramway နှင့် Tunnel Operations General Directorate (IETT) နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများစတင်လိုက်ပါပြီ။ ဘာသာရပ်အပေါ်လုပ်ကြေညာချက်, le
သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏လိပ်စာများကိုပေးပို့ဖို့ IETT အခမဲ့ခရီးသွားကဒ် 18 / 05 / 2014 IETT သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အခမဲ့ခရီးသွားကဒ်များကိုလိပ်စာသို့ပို့ပါလိမ့်မည်။ IETT သည် 65 မေလမှအခမဲ့ခရီးသွားကဒ်များကိုလက်ခံရရှိသည်အထိ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကဒ်ပြားကိုပြခြင်းဖြင့်ခရီးသွားသော 15 အသက်နှင့်အထက်ရှိသူများအတွက်ခရီးသွားကဒ်များကိုပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
Kocaeli ဟာမြို့တော်ကနေသတိပေး: "ဗီဇာကျောင်းသားခရီးသွားကတ်များကိုလုပ်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်" 10 / 11 / 2017 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနကျောင်းသား၏လျှော့စျေးခရီးသွားကဒ်ပြားဗီဇာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်နို ၀ င်ဘာပထမပတ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ခရီးသွားကဒ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်အတည်ဖြစ်သည်။
ခရီးသွားကဒ်များရုံးဘတ်စ်ကားဘူတာရုံAltınorduမှဖွင့်လှစ် 19 / 02 / 2018 Altınorduခရိုင်ရှိအများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များတွင်အသုံးပြုသောအခမဲ့နှင့်လျှော့စျေးကဒ်များဖြန့်ဖြူးရန်ရုံးခန်းသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်အသုံးပြုသောအခမဲ့နှင့်လျှော့စျေးကတ်များ, 17 February 2018 Saturday Cumartesi
ပြည်တွင်းဘတ်စ်ကား Sileo သည်ဥရောပသို့ဖွင့်လှစ်သည်
အားလုံးတူရကီကျော်တစ်ကဒ်နှင့်အတူ "အမျိုးသားအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကတ်များ" ရောက်ရှိဖို့မည်!
သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏လိပ်စာများကိုပေးပို့ဖို့ IETT အခမဲ့ခရီးသွားကဒ်
Gebze-Pendik လိုင်း Pendik-Gebze ဘတ်စ်ကားလိုင်းများ၏မယ့်အစားဆင်ခြေဖုံး
တူရကီနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ် Erzurum ရုံးဖွင့်လှစ်
ဟေးလ်ကိုင်ရိုနိုင်ငံတကာ Multi-Purpose Complex "ဟု The ဂိတ်" ဟုအဆိုပါစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရုံးထဲမှာရှေးခယျြခံခဲ့ရ
ဓာတ်ဆီ Ofisi ဘူတာထဲမှာ TAV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အထူးရောင်းကောင်းသည်များ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (193) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (973) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)